| २९ मंसिर २०७८, बुधबार १४:२७ , प्रकाशीत
बाजुरा, २९ मंसिर ।
बाजुराको बुढिनन्दा नगरपालिका–१ पिपलडालीका दुई बालबालिकाको बिचल्ली भएको छ । बुबाआमाले अर्को बिहे गरेपछि उनीहरूको बिचल्ली भएको हो । बुबा हर्क लुवार र आमा रिठु लुवारले दोस्रो विवाह गरेपछि ७ वर्षीया दिपीका लुवार र ४ वर्षका पुष्प लुवारको बिचल्ली भएको हो ।
साथमा रहेका हजुरबुबा जंगवीर लवार र हजुर आमा धिरु लुवार पनि वृद्धवृद्धा भएकाले उनीहरूको पालनपोषणमा समस्या भएको छिमेकी मनवीर विकले बताए । छोरा र बुहारीले दोस्रो बिहे गरेपछि नातिनातिनीको बिचल्ली भयो,’ हजुर बुबा जंगवीरले भने, ‘उनीहरू विद्यालयसमेत जान पाएका छैनन् ।’
हलिया परिवारका उनीहरूको गाँसबासको समेत टुुंगो छैन । ‘बिहान खाए बेलुका के खाने ? बेलुका खाए, बिहान के खाने ? भन्ने चिन्ता भएकोले नाबालक नातिनातिनीलाई बिद्यालय पठाउन सकेको छैनौँ,’ हजुर आमा धिरुले गुनासो गरिन् ।